Fanorenana sy asa vaventy Tsy ampy ny akora fototra ny hamokarana simenitra
Mbola maro ny akora fototra hafarana any ivelany amin’ny fanamboarana ny simenitra hoy ny fanambaran’ny tompon’andraikitry eo anivon’ny Holcim,Patrick Rajaonarivelo.
Anisan’izany ohatra ny vokatra Clinker izay misy any amin’ny faritra Imbity saingy tsy ampy mihitsy ary tsy mahasahana ny famokarana eto Madagasikara. Omaly no nampahafantarina tetsy amin’ny foibe Holcim ny vokatra vaovao Orimbato 42,5 izay hahafahana mahavita rihana 6 na 7 mihitsy mba ho fitsinjovana ny mpanjifa. Hatreto aloha dia eto Antananarivo sy Toamasina ihany no misy ny vokatra ary miezaka mitady ny fahafaham-pon’ny mpanjifa izy ireo. Nilaza ihany koa ny tompon’andraikitra fa tsy tokony hatahorana ireo mpifaninana rehefa manana vokatra tsara sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Tsiahivina mantsy fa manana ny fenitra ISO 9001 sy ISO 14001 ny vokatra Holcim Madagascar.